Ikhabethe lezincwadi zezindaba ~ I-Playhouse Enemibala Emibalabala - I-Airbnb
Ikhabethe lezincwadi zezindaba ~ I-Playhouse Enemibala Emibalabala
Indlu encane ibungazwe ngu-Rob
Ngena emnyango wekhaya elincane Lencwadi Yezindaba futhi ulungiselele ukuhanjiswa ubuyiselwe ebuntwaneni bakho. Lesi sikhala esijabulisayo nesinemibalabala senzelwe umuntu oseyingane enhliziyweni futhi ohlale efisa sengathi ngabe angangena endlini yokudlala. Ikhabethe lezincwadi zezindaba lihlala eduze ne-Hiker's Grotto etholakala ngaphandle kwenkokhiso eyengeziwe. I-Grotto inekhishi nezindlu zangasese ezigcwele amashawa angaphakathi.
Bheka I-Rob's Guidebook ukuze uthole ukuhamba ngezinyawo kwasendaweni nokunye okukhangayo.
Kukhona i-Keurig yekhofi. Kunendlu yangasese enikezwa imfihlo ngokudonsa ikhethini, kukhona nosinki. Ikhabethe liyashisisa futhi liyapholiswa, futhi linamanzi ashisayo... isifudumezili samanzi esincane kakhulu. Siphinde sahlinzeka ngeshawa yangaphandle ukuze sigeze ngokushesha. (Ishawa yangaphandle ivaliwe kusukela ngo-Nov 1-April 1) Futhi, isishicileli samanzi sincane kakhulu kodwa sanele ngokwanele ukugeza okuyimizuzu emi-3. :)
I-Union Pacific Railroad yomlando iseduze nale ndawo futhi uzokwazi ukuyizwa. Ikhabhinethi ingaphandle komgwaqo nokho ihlezi esidlekeni esithokomele sohlaza ukuze ikunikeze lokho kuphunyuka okudingayo kokungokoqobo. Ungathola yonke into ongase uyidinge e-Walmart imizuzu eyi-10 ezansi ngendlela e-Clarksville noma uthathe imizuzu embalwa ukuya ku-Dollar General uyolanda ukudla okulula okujabulisayo nanoma yiziphi ezinye izidingo ngenkathi ubaleka. Hlala ubusuku noma isonto lonke futhi uzoba nakho konke okudingayo!
Siseduze nesakhiwo futhi sitholakala 24/7 ngesikhathi sokuhlala kwakho. Indlela engcono kakhulu yokuxhumana nathi uma kunesimo esiphuthumayo ukushayela u-Rob kodwa ukuxhumana okuvamile kungenziwa nge-Airbnb. Phakathi kuka-Rob no-Kami, kuhlale kukhona othile ongaphendula ngokushesha ku-Airbnb.
Siseduze nesakhiwo futhi sitholakala 24/7 ngesikhathi sokuhlala kwakho. Indlela engcono kakhulu yokuxhumana nathi uma kunesimo esiphuthumayo ukushayela u-Rob kodwa ukuxhumana okuva…